Caasimadda dalka Ingariiska ee London ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirkii looga hadlayay arrimaha dalka Soomaaliya oo ay marti gelisay dowladda dalka Ingariiska.
Madaxweyne Farmaajo, wasiirka arrimaha dibeda ee dalka Ingariiska iyo xoghayaha guud ee QM ayaa si wadajir ah shir jaraaid u qabtay gebagebadii shirkii maanta.
Farmaajo ayaa u mahadceliyay hoggaamiyeyaasha caalamka iyo qurbo joogta Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ka jawaabeen baaqii dowladdiisa ee ahaa in gargaar lala soo gaaro shacabka ay abaaruhu ku habsadeen.
Waxana uu sheegay madaxweyne Farmaajo in abaaraha dalka ka jira ay barakiciyeen ilaa 600,000 oo qof tan iyo bishii Nofembar ee sanadkii tegay (2016), wuxuuna ugu baaqay caalamka in laga hortago in dalka ay ka dhacdo xaalad bani’aadanimo iyo sidoo kale in diiradda la saaro sidii looga soo kaban lahaa abaarta.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda ay leedahay alkumidda barnaamij ay Soomaalida hormuud u tahay oo lagu tababarayo ciidammada qaranka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha dibeda ee dalka Ingariiska ayaa isagana shaaca ka qaaday in loo baahan yahay iskaashi dhaw oo ku aadan qaabka loo wajahayo dhismaha ciidanka qaran oo ay Soomaliya yeelaneyso.
May 12, 2017 tuugahaladilo2015
Madaxweynaha Famaajo oo Dalka Ivory Coast Kula Kulmay Madax ka Socota Caalamka (VIDEO) December 1, 2017